कागजात नपुगेको भन्दै मंसिर १५... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
कागजात नपुगेको भन्दै मंसिर १५ गते फर्काएको दुर्गा प्रसाईंको निवेदन गिरीले किन दर्ता गरे?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, फागुन १
चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन माग्दै दिएको निवेदन बिहीबार दर्ता गर्‍यो। आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले मंसिर १५ गते नै दर्ता गर्न बिएण्डसीले ल्याएको निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उनले पहिले त्यही निवेदनमा चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिमका कागजात समावेश नभएको भनी दर्ता गर्न मानेका थिएनन्। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सामान्य तारेखमा छुटेलगत्तै बिएण्डसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं निवेदन लिएर आयोगको कार्यालय पुगेका थिए।
पहिले कागजात पूरा नभएको भनी फर्काइएको त्यही निवेदन बिहीबार उपाध्यक्ष गिरीले दर्ता गराएको प्रसाईंले बताए। त्यही दर्ता गर्नु थियो भने उपाध्यक्ष गिरीले मंसिर १५ गते किन निवेदन फिर्ता गरे भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।
प्रसाईं छुटेलगत्तै पुरानै निवेदन दर्ता गर्न प्रसाईं पुग्दा गिरी ‘युटर्न’ भएका हुन्।
‘पहिले उहाँले जुन निवेदन दर्ता गर्न मान्नुभएन, आज त्यही निवेदन लिएर जाँदा सरक्क दर्ता गर्नुभयो,’ प्रसाईंले भने।
गिरीले पनि प्रसाईंले ल्याएको निवेदन दर्ता गरेको सेतोपाटीलाई बताए। तर, उनले निवेदनमा कागजात पुगे नपुगेको नहेरेको बताए। पुरानो हो कि नयाँ हो भन्ने पनि उनले राम्रोसँग नहेरेको बताए।
पहिले निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै प्रसाईंले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाउँदा भनेका गिरीले थिए, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले मागेबमोजिमका कागजात नदेखेपछि दर्ता गरिएन।’
तर, पहिले फर्काइएको निवेदन नहेरी दर्ता किन भयो भन्नेमा उनले ‘घुमाउरो’ उत्तर दिए। ‘पहिले उहाँले निवेदन छोडेर जानुभएन, आफैं बोकेर जानुभयो, अहिले निवेदन छोडेर जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब निवेदनमा के पुगेको छ/छैन हेरिन्छ।’
यो निवेदन आफूले नहेरी दर्ता गरेको उनले बताए। ‘मैले हेरेको छैन, अब हेर्छु,’ उनले भने।
निवेदनमा के छ भन्ने हेर्दै नहेरी कसरी दर्ता भयो? प्रश्नमा उनले भने, ‘हैन, हैन अब हेरिन्छ। दर्ता गर्न त पाइयो नि।’
बिएण्डसीको निवेदन अस्वीकार गरेपछि गिरीमाथि प्रसाईंले होटल द्वारिकाजमा बोलाएर २० करोड घुस मागेको बताएका थिए। ‘उहाँले यही निवेदन दर्ता गर्नुथियो भने पहिले नै किन गर्नुभएन? उहाँलाई नै सोध्नुहोस्,’ प्रसाईंले भने, ‘उहाँ चुक्नुभएको होइन र?’
बिएण्डसी राजधानीबाहिर सम्बन्धन कुरेर बसेको मेडिकल कलेज हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमै मनसायपत्र पाइसकेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उल्लेख भएपछि प्रसाईं सम्बन्धनका लागि धाइरहेका छन्।
सोही विषयमा निवेदन नलिएको भन्दै गिरीमाथि घुस मागेको आरोप प्रसाईंले लगाएका थिए। सो आरोपपछि गिरीले प्रसाईंविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जती गरेको आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गरेका छन्। गिरीले नै प्रसाईंविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा अभद्र व्यवहार कसुरको निवेदन दिएका थिए।
सो कसुरमा भक्तपुर प्रशासनले साधारण तारेखमा रिहा गरेलगत्तै प्रसाईं पुरानै निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए। प्रसाईंले गिरीले दर्ता गर्न बोलाएपछि आफू पुरानै निवेदन लिएर गएको बताए। ‘अब त निवेदन अगाडि बढाउनु हुन्छ होला नि?,’ उनले भने।
पुरानो निवेदन नै दर्ताका क्रममा गिरी र प्रसाईंबीच के कस्तो ‘मिलाप’ भयो भन्ने विषयमा दुबै खुलेका छैनन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १, २०७६, २२:१८:००
ओलीलाई भेटेर शेखरले भने- राजीनामा दिनुस्
सोमराज भन्थे- नआत्तेऊ, पैसा कमाएर तिम्रो उपचार गर्छु…बाकसमा फर्किए
स्थानीय महिलाको सीपलाई ब्रान्ड बनाउने डाँफे
जापानको पानीजहाजभित्र क्वारेन्टाइनमा रहेका एक नेपालीलाई ल्याइयो नयाँदिल्ली
रवीन्द्र अधिकारीको सम्झनामा पाथीभराको गोरुजुरेमा स्मृति पार्क बनाइने
देश छाड्ने कल्पना पनि गरेको छैन: सुजाता कोइराला
व्यापारीहरूको इशारामा अर्थमन्त्री फेर्ने खेल भएको प्रधानमन्त्रीको आरोप